पुँजीबजारमा दण्डहीनता - Karobar National Economic Daily
query_builderJanuary 8, 2017 8:10 AM supervisor_accountज्योति दाहाल visibility1533
पुँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरू छाडा हुँदै गएका छन् । पछिल्ला समयमा विकसित गतिविधि हेर्दा साधारण सेयरधनीलाई सेयर दिएर गुन लगाएको वा संस्थापकको भाग खोस्न आएका सौतेला र झड्केला सन्तानझैँ व्यवहार गर्न थालेका छन् । यसो हुनुको मूल कारण दण्डहीनता हो ।
स्टक एक्सचेन्ज, समाशोधन (क्लियरिङ) बैंक, सूचीकृत कम्पनी, केन्द्रीय निक्षेपक, मर्चेन्ट बैंक, दलाल, निक्षेप प्रतिनिधि भएर मात्र पुँजीबजार पूर्ण हुँदैन । जोखिम लिएर लगानी हाल्ने लगानीकर्ता पुँजीबजारका आधारभूत पक्ष र पूर्णता हुन् । लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्ने दायित्व पुँजीबजार नियमन गर्ने नियामकको हुन्छ ।
नियामकले जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सूचना यथाशीघ्र सम्प्रेषण गर्न लगाउनुपर्छ । तर, नियामकभन्दा सूचीकृत कम्पनी बलवान् बनेर लगानीकर्तालाई तुच्छ सम्झिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक दण्डाधिकारीका रूपमा उभिएर लगानीकर्ताको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।
अनुसूची १६ र कानुन उल्लंघन
पुँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले विभिन्न २५ वटा घटनाको तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ मा व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीमा विशेष घटना वा परिस्थिति भनेर विषयगत टिपोट गरिएको छ र ती टिपोटको विस्तृत व्याख्या द्रष्टव्यमा गरिएको छ ।
अनुसूचीमा उल्लिखित घटना र परिस्थितिलाई कम्पनीहरूले सकेसम्म जानकारी गराउँदैनन् । गराइहाले पनि ढिलो गराउँछन् । आजभोलिको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांश घटनाको जानकारी गराएको पाइएको छैन ।
अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएका घटनाहरू जानकारी गराउन छाडेसँगै धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको समेत ठाडै उल्लंघन गर्न थालिसकेका छन् । धितोपत्र कानुनको उल्लंघन हुँदासमेत नियामकले कम्पनीलाई कारबाही गरेको जानकारी आएको छैन ।
उल्लंघन कस्ता–कस्ता ?
एउटा वाणिज्य बैंकले हकप्रद सेयर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बाँडफाँड गरेर चालू आर्थिक वर्षमै पुँजीकृत गरे पनि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानीको गणना हकप्रद जारी गर्नुअघि कायम रहेको पुँजीलाई मात्र आधार मानेर गर्‍यो ।
यसबारे सर्वत्र चासो देखिएपछि ‘आम्दानी नगरेको हकप्रदबाट प्राप्त भएको पुँजीलाई गणनामा सामेल नगरिएको’ भन्ने जानकारी गरायो । असार ३२ गते बाँडफाँड भएको हकप्रदले लाभांश पाउँदैन त भन्ने प्रश्न आए पनि आम्दानी नगरेको भनिएको हकप्रदलाई समेत समेटेर लाभांश दियो ।
भदौ महिनामा हकप्रद बाँडफाँड गरेका अर्का दुई वाणिज्य बैंकले पनि लाभांश घोषणा साविकको पुँजीलाई आधार मानेर गरे पनि लाभांश दिँदा हकप्रद समेतलाई जोडेर दिए । यसलाई सामान्य गल्ती मान्न सकिएला तर अक्षम्य चाहिँ हैन । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सूचीकरण अवधि एक वर्षको हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सूचीकरण नवीकरण गर्नुपर्छ तर हरेक वर्षको कात्तिक १ गते नवीकरण नगरेका कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको सूचना नेप्सेले जारी गर्छ । सेयर रोक्का गर्दा सजाय कम्पनीलाई हुन्छ कि लगानीकर्तालाई ?
समयमा नवीकरण नगरेका कारण कारोबार रोक्का हुँदा ‘तरल सम्पत्ति’ भनिने सेयर किनबेच गर्न वञ्चित हुनुपर्छ । समयमा नवीकरण नगर्ने कम्पनीहरू वर्षैपिच्छे दोहोरिइरहेका छन् । यो पनि दण्डहीनताको एउटा स्वरूप हो ।
प्रणालीमा चलेको भनिएको एउटा वाणिज्य बैंक र अर्को एउटा वित्त कम्पनीले बेलैमा सूचना नदिएको भन्दै नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्‍यो । यहाँ पनि सजाय लगानीकर्ताले पाए । एक त सूचना बेलैमा नपाउनु, अर्को सेयर किनबेच गर्नै नपाउने गरी कारोबार रोकिँदा एउटा होइन, एकैपटक दुइटा मार खानुपर्‍यो । यसलाई पनि दण्डहीनताको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ ।
एउटा लघुवित्तले हकप्रद सेयर बिक्री जारी रहेकै बखत फेरि हकप्रद जारी गर्ने सूचना हतारहतार नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो । यतिखेर भने कम्पनी अति जिम्मेवार बनेर सूचना सम्प्रेषण गरेको देखाइयो तर वास्तविकता भने अर्कै थियो । सेयरबजारमा निकै महँगो मूल्य रहेको कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर राख्नका लागि धितोपत्र कानुनकै उल्लंघन गरियो ।
नेप्सेले कारोबार रोक्का गरिदियो । सजाय भने लगानीकर्ताले नै पाए । धितोपत्र कानुनमा एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद जारी गर्न सक्ने र सूचीकरण भएको मितिबाट १ सय ८० दिन पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत हकप्रद जारी गर्ने घोषणा आएको थियो । यो घटना माथि उल्लिखितभन्दा बढी गम्भीर हो ।
एउटा विकास बैंकको साधारणसभाबाट पारित हकप्रद जारी गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिले रद्द गरी अर्को बैंकसँग विलयमा जाने निर्णय गर्‍यो । यसको पनि सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ ।
हकप्रद जारी गर्नेसम्बन्धी कम्पनीको प्रस्तावलाई लगानीकर्तासँग गरिएको अप्रत्यक्ष रूपको करार मान्न सकिन्छ । कतिपय करार रद्द गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा करारको यथावत् परिपालनाले मात्र दुवै पक्षको हित हुन्छ ।
हकप्रद जारी गर्ने भनेर जारी गरिएको सूचनाअनुरूप हकप्रदको लोभ र मोहमा सेयर खरिद गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले अब त्यस्ता सेयरहरू विक्रेतालाई फिर्ता गर्न सकिन्न ।
यस्तो अवस्थामा हकप्रद कार्यान्वयन मात्र एउटा विकल्प बाँकी रहन्छ । यो घटनामा पनि लगानीकर्ताले नै सजाय पाए र पीडा भोग्नुपरेको छ । यस्ता कम्पनीका सञ्चालक गम्भीर अपराधका दोषी हुन् ।
दण्ड किन दिने ?
विधिशास्त्रमा एउटा सूत्र प्रचलित छ, ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’ कानुन जानिनँ वा गल्ती भयो, क्षमा पाऊँ भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन । यदि नजानेरै वा अनायासै गल्ती भएछ भने पनि दण्डको भागी हुनुपर्छ । गल्ती गर्ने मनसाय नदेखिएमा सजायको हद केही कम हुन सम्म सक्छ, तर पूरै दण्ड माफ हुँदैन ।
दण्डको प्रचलन आदिम वैदिक कालदेखि नै चलिआएको छ । वेदले खराब कार्य गरेमा दण्डको भागिदार हुनुपर्छ र दण्ड कसले कसरी गर्ने भन्ने बताएको छ । शास्त्रीय विद्वान् मनुले दण्ड दिनुको कारण ‘यदि न पणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः । शूले भस्म्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः’ भनेका छन् ।
यसको अर्थ हुन्छ, ‘कसुरदारलाई दण्ड नदिने हो भने राज्यमा अव्यवस्था र अराजकता फैलिन्छ, माछालाई सुइरोमा उनेर कोइलामा पोलेसरि बलवान्ले निर्बललाई यसरी नै प्रताडना र हैरानी दिन्छन् ।’ एक जना न्यायाधीशले ‘तिमीलाई भेडा चोरेको कारण सजाय दिइएको होइन, अरूले भेडा चोरी नगरून् भनेर दिइएको हो’ भनेर भेडाचोरलाई सुनाएको फैसला दण्डशास्त्रमा निकै प्रख्यात छ ।
ब्राडले नामक दण्डशास्त्रीले ‘दण्ड दिनुको अरू कुनै कारण छैन, यो हाम्रो हाम्रो कर्तव्य हो । दण्ड दण्डका लागि दिने हो’ भनेका छन् ।
बेलायतमा हाउस अफ लर्ड्सले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ, नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ । कम्पनीको ऋणपत्र किन्नुस्,’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाइएकोमा त्यसका प्रबन्ध सञ्चालकलाई फौज्दारी अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि सान्दर्भिक हुन्छ ।
माथि उल्लिखित विभिन्न घटनाका दोषी कम्पनीका सञ्चालक, उच्च तहका अधिकारीलाई कुनै सजाय नगर्ने हो भने पुँजीबजारमा ‘अराजकता र कर्पोरेट डिसअर्डर’ संस्थागत हुन्छ । यस्ता घटनाका दोषीलाई सामान्य नगद जरिवाना वा सचेत गराएर मात्र पुग्दैन फौजदारी अभियोग नै लगाएर सञ्चालक र उच्च तहमा जानबाट रोक लगाउनुपर्छ अनि मात्र संस्थागत संस्कार र सुशासन आउँछ ।
उल्लिखित घटनाका सबै कम्पनी नियमन हुने क्षेत्रका हुन् । नियमन नहुने वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पुँजीबजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोच्नैपर्ने विषयका रूपमा माथि उल्लिखित घटनालाई लिनु नितान्त जरुरी छ ।
लगानीकर्ता पुँजीबजार सेयरधनी दण्डहीनता